China Ngwurugwu Igha Mmiri Ruru 60w China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ngwurugwu Igha Mmiri Ruru 60w - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ngwurugwu Igha Mmiri Ruru 60w)
Ngwurugwu Ngwurugwu Led Ling Light Knuckle Mount 60W
Ngwurugwu Igwe Ighachị Anyị nke Led 60ed nwere ike ime ka ihe dị ọwụwa ruo 7200lm. Ezigbo Iju Mmiri loodlọ a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ugwu a na-efegharị nke na-efegharị efegharị nke nwere eriri igwe nwere nkwụsi ike, nke kwụsiri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, what nwere ike iwunye ngwa...
IP65 Led Ìhè Mmiri 40W 60W 80W
Iju mmiri anyị 80w Led nwere ike ịmịpụta ihe karịrị ọhụụ nke 9600lm. Nke a Led Flood Light 60w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Igwe Ọdụdọ a nke 40w nwere eriri igwe anaghị agbazi, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, can nwere ike iwunye ngwa ngwa ihe ịchọrọ. Site na ntufu IP66, ọkụ mmiri 250w...
IP66 Led Ìhè Mmiri 50W 65W 70W
Light Light Lw Light 50w Ip66 anyị nwere ike iwepụta ihe ruru 6000lm. Iju mmiri nke Ledia 65w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Lightps Led Flus Light 70w nwere eriri igwe anaghị agbazi, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, can nwere ike iwunye ngwa ngwa ihe ịchọrọ. Site na ntulee IP66, a na-eji ọkụ...
IP65 Led Iju mmiri Ìhè 40W 50W 5000K
Iju mmiri anyị nke Led 50ed nwere ike ịmịpụta ihe ruru 6000lm. Ìhè Igwe Ọkụ A Ledere 40 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Light lightww 50w Ip65 a nke nwere ihe ngbanwo igwe eji emeghari , nke kwụsiri ike ma nwekwaa ntukwasi obi, can nwere ike iwunye ihe ichoro choro. Site na ntulee IP66, oke ide...
Ìhè Mmiri Lega Gara Ọdụdọ 500W Nhazi 240v
Nsonaazụ a dị elu nke Led Light 500w dakọtara nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Ìhè Ọdọ Mmiri Led Gara dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ Iju Mmiri 240v bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. Ihe ọkụ...
Ìhè Mmiri Ledanụ 75 Watt 80Watt 4000K
Ìhè Ìhè nke 80w 80w anyị nwere ike ịmịpụta ọmarịcha 9600lm. Nke a Ugwu Ihu Iri Late 75 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Igwe Ọdụdọ 4000k a nke nwere nkwụ ọtọ , nke kwụsiri ike ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya, can nwere ike iwunye ihe nkuku ịchọrọ. Site na ntule IP66, ọkụ ọgbụgba ọkụ cob...
Led Wall Flood Light Lightmable 60W 5000K
Ìhè Ìhè nke Anyị Led Wall nwere ike ịmịpụta ruo ihe dị ka 7200lm. Nke A Chetara Iju Mmiri bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Nke a mere ka Iju Mmiri Home ebusa na a mgbanwe metal mgbodo, ọzọ mụ na a pụrụ ịdabere, Ị nwere ike mfe wụnye what`s n'akuku ị chọrọ. Site na ntulee IP66, enwere ike iji ọkụ...
Ìhè Ihu Igwe Ọdụdọ nke 60W 65W
Ìhè Ihu ọkụ Anyị nke Led na-enwu enwu nwere ike ịmị ọkụ ruo ihe dị ka 7200lm. Nke a Ugwu Iri Ledaa 65 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Igwe ọkụ nke 65w a nwere mgbanaka nwere igwe eji arụ ọrụ, nke kwụsiri ike ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya, can nwere ike iwunye ngwa ngwa ihe ịchọrọ. Site na...
Ngwurugwu Led azụmaahịa Led azụmaahịa 200W 24000LM
Ìhè Ìhè nke 200w anyị nwere ike ime ka ihe na-enwu enwu dị 24000lm. Ìhè Mmiri Ego Azụmaahịa Ledara bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ.The Light Led Flood Light Fixtures 200w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi, ị nwere ike iwunye ya ihe ịchọrọ. Site na ntulee IP66, oke mmiri...
Light Light Ìhè Mmiri 800W 104000LM
Ìhè Igwe Ọdụdọ A 800ed nwere ọnụọgụ 104,000lumens. Oke Iju Mmiri nke Amazon Led dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ebe egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Ìhè Nchebe Ọkụ Lede a bụ IP65 echebekwara ya ime mmiri. Ngwakọta a na-adịgide...
Ìhè Ihu Igwe Ọdụdọ nke 50 Watt 60Watt 5000K
Ìhè Ihu Igwe anyị nke 50 Watt nwere ike ịmị ọkụ ruo 6000lm. Ìhè Igwe ọkụ a 60w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Rọpụtara Ọdịmma Anyanwụ nke 50 nke a nwere eriri igwe, nke kwụsiri ike ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya, can nwere ike iwunye ngwa ngwa ihe ịchọrọ. Site na ntufu IP66, mgbanyụ mmiri...
800W duziri ọkụ ide mmiri maka bọl bọọlụ
800W duziri ọkụ ide mmiri maka bọl bọọlụ Bbier na-ewebata Stadiumlọ Egwuregwu Bọọlụ Bọọlụ maka nnukwu ebe egwuregwu na ebe a na-egwu egwuregwu, ma ọ bụ oghere ọ bụla ọzọ chọrọ ezigbo ọkụ. Igwe a na-eji ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ eme ihe na-enye ọkụ elele na oge ọkụ ọkụ efu. IP66 - A na - ekpochi ikpo ọkụ...
Pesdị Housinglọ Egwuregwu Iju Mmiri nke 50W 6000LM
Pesdị ọkụ nke Iju mmiri anyị 50W nwere ike iwepụta ihe ruru 6000lm na-egbuke egbuke. Lightlọ Lightlọ Elu mmiri a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Nke a Igwe ọkụ na-enwu ọkụ nwere eriri igwe anaghị arụ ọrụ, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, can nwere ike iwunye ngwa ngwa ịchọrọ. Site na ntulee IP66,...
Oriọna Igwuregwu Iju Mmiri Stadium 150W 5000K
Ìhè Ihu Igwe mmiri anyị nke 150w nwere ike ịmịpụta ihe ruru 18000lm. Stadiumgbọ egwuregwu Light Light bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Igwe ọkụ a na-enwu enwu n’elu mmiri 150w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,, nwere ike iwunye ihe nkuku ị choro. Site na ntulee IP66, enwere ike iji...
Ubi na-ere ọkụ na mmiri maka ire 100W 12000LM
Ogige ọkụ Iju Mmiri Anyị 100w nwere ike iwepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ìhè Igwe mmiri a 100 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Ìhè a na-ere ere ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,, nwere ike iwunye ihe nkuku ị choro. Site na ntule IP66, mgbanyụ ọkụ 90 watt anyị nwere ike iji...
Ngwurugwu Igha Mmiri Ruru 60w Ngwurugwu Igha mmiri ruru 60w Ngwurugwu Iju Mmiri Egwuregwu Ọgba Mmiri 50W 6500lm Ngwurugwu Led Igha Iche 200w Egwuregwu Iju Mmiri Egwuregwu Ọgba Mmiri Led Egwuregwu Mmiri Iju Mmiri